Olee otú ibudata YouTube video na music ka Windows Media Player? e
N'anya ọhụrụ hit song site Beyonce na chọrọ ibudata ya ngwa ngwa? Ọfọn, nbudata videos na audios bụ nnọọ nkịtị ugbu a ụbọchị na e nwere ndị a ọnụ ọgụgụ nke mfe ụzọ n'ihi na ị na-eme otú ahụ. Windows Media Player ugbu a-enye gị ohere mbubata a ọnụ ọgụgụ nke ebudatara audio / video faịlụ nke mere na ị nwere ike igwu ha na gị onwe gị mma.
Nkebi nke 1: Olee otú ibudata YouTube video na music ka Windows Media Player?
Nkebi nke 2: nke usoro dị mma maka nbudata YouTube videos?
Maka nbudata YouTube videos na music ma na-akpọ ya na Windows Media Player, i kwesịrị ibudata chọrọ faịlụ na mgbe mbubata ya na gị na Windows Media Player. Akụkụ mbụ na-agụnye nbudata chọrọ audio / video faịlụ. Ị nwere ike ibudata YouTube video ma ọ bụ ọdịyo na ụzọ abụọ.
Usoro 1: Jiri Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo bụ kacha ngwaahịa ga-ezute gị niile music mkpa. Ọ bụ kpam kpam free software na ike ga-arụnyere na Windows nakwa dị ka Mac arụ ọrụ usoro. Soro nzọụkwụ n'okpuru iji wụnye a free software na-enwe nbudata YouTube videos na music.
Nzọụkwụ 1 Wụnye Wondershare TunesGo software
Biko gaa na-esonụ URL ibudata ọhụrụ version nke Wondershare TunesGo software maka ma gị Windows ma ọ bụ Mac arụ ọrụ usoro.
E wezụga na nbudata na audio / video faịlụ ngwa ngwa, ị nwekwara ike ime a ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị dị mkpa na Wondershare TunesGo. Mgbe ibudatara audios / videos si internet, ị na-abịa gafee a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats ụfọdụ nke na-ọbụna bụghị gị na-akwado ọkpụkpọ. Otú ọ dị na Wondershare TunesGo, ị nwere ike mfe tọghata ọ bụla faịlụ Ọkpụkpọ n'ime kwesịrị ekwesị formats na ike ga-egwuri site na gị ọkpụkpọ.
Nzọụkwụ 2 Ozugbo ị ibudatara na ọma arụnyere na Wondershare TunesGo software, ị nwere ike ịmalite ịgagharị na nbudata na YouTube videos na music for free. I nwekwara ike ịgbakwunye na vidio ndị a na audios n'ime gị ọbá akwụkwọ ngwa ngwa.
Nzọụkwụ 3 Import ebudatara faịlụ ka ọbá akwụkwọ
Usoro 2: Jiri free online Downloader
E wezụga na iji Wondershare TunesGo software maka nbudata na YouTube videos, ị nwekwara ike tụlee iji online Downloader maka otu nzube. Ugbu a, i nwere ike mfe ibudata YouTube videos na elu definition iji ndị a free online ngwaọrụ na-adị mfe dị na internet. A bụ ndepụta nke n'elu 3 online nbudata ngwá ọrụ ndị ị pụrụ iji maka nbudata akparaghị ókè ọtụtụ free YouTube videos:
• Keepvid: Keepvid bụ ukwuu bara uru, mfe ma free software na enye gị ohere download akparaghị ókè ọtụtụ YouTube videos free nke na-eri. The software dị maka ma Windows na Mac ịwa usoro.
• Zamzar: Zamzar bụ a onye nke ya ụdị software nke na-enye a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ ka ọrụ. The nnọọ mfe interface na uru ime ka ọ n'etiti ndị kasị mma software dị maka nbudata YouTube videos.
• Buru-tube: Ọ bụrụ na nbudata YouTube videos bụ ihe niile ị chọrọ, mgbe ahụ, Nọgidenụ na-tube bụ ihe kasị mma software n'ihi nzube a. Maka nbudata na YouTube videos site Nọgide-tube, ihe niile ị chọrọ ime bụ, idetuo na mado YouTube njikọ na pịa download bọtịnụ. The software ga ibudata video-akpaghị aka.
Mgbe ha abụọ ndị a ụzọ ike ga-eji maka nbudata YouTube videos, ị ga-na-amasị iji onye, ​​nke bụ ihe oru oma na onye ọrụ-enyi na enyi. Wondershare TunesGo awade ya ahịa na a dịgasị iche iche nke ọrụ gụnyere faịlụ Ọkpụkpọ akakabarede, nyefe nke faịlụ, mmezi na ihicha ụlọ nke music ọba akwụkwọ wdg Ya mere, mgbe ị download Wondershare TunesGo software, ị ga-esi ibu nke ndị ọzọ na atụmatụ dị ka mma.
Anyị nwere ike iji tụnyere n'etiti ndị a ụzọ nke nbudata YouTube videos na-esonụ ndabere:
• Download ọsọ: The download ọsọ nke Wondershare TunesGo software nnọọ elu mgbe tụnyere ya ndị asọmpi. Mmepe nwere wuo software dị otú ahụ n'ụzọ na-ọ na-akwado ngwa ngwa nbudata oge ọ bụla.
• Download ọma ọnụego: Wondershare TunesGo akwado a ọnụ ọgụgụ nke faịlụ formats nke bụ otu n'ime ndị isi ihe mere ya download ọma ọnụego bụ nnọọ elu mgbe tụnyere ndị ọzọ YouTube videos nbudata ngwaọrụ. Ị nwere ike ibudata fọrọ nke nta ụdị ọ bụla nke video faịlụ site YouTube na mgbe ahụ tọghata ya ndị mkpa faịlụ Ọkpụkpọ na otu TunesGo software.
• Pro ọrụ: Wondershare TunesGo na-enye gị a ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ iche si nnọọ na nbudata YouTube vidiyo na ọdịyo faịlụ. Ihe mgbaru ọsọ nke TunesGo mmepe bụ imeri drawbacks nke iTunes. Ya mere mgbe i ibudata a kacha software site Wondershare, ị bụghị nanị na-enweta nnwere onwe ibudata akparaghị ókè ọtụtụ YouTube videos ma ị nwekwara ike ịgbakwunye ha gị Ọbá akwụkwọ, ọkụ ha, jikwaa ha, hichaa ha ma nyefee ya na gị na android ma ọ bụ iOS ngwaọrụ ngwa ngwa.
> Resource> YouTube> Olee otú ibudata YouTube video na music ka Windows Media Player?